Linux ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါသလား။ စပ်စုနှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောများအတွက်လမ်းညွှန်။ | Linux မှ
ဤလမ်းညွှန်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအသစ်ရောက်ရှိလာသောလူများအတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ Linux အကြောင်းဘာကိုသိလိုသည်ကိုသိလို။ ဖြစ်သည်။ "ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်း" အလွန်အမင်းအသုံးမပြုဖို့ကြိုးစားနေသည့် operating system တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ဗန်းစကား ပင်ဂွင်းအသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ကိုင်တွယ်သည်၊ အတွေ့အကြုံကအနည်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖြစ်သည် "စိတ်ဒဏ်ရာ" ဖြစ်နိုင်;) ။
စကြပါစို့: D ...
1 Linux ဆိုတာဘာလဲ။
2 Linux မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
2.1 အိုကေလူ၊ မင်းငါ့ကိုယုံတယ်ငါ Linux ကိုစမ်းချင်တယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်သလဲ
2.2 သင်၏ distro ကိုရွေးချယ်ပါ။
4 pendrive တစ်ခု၊ USB မှတ်ဉာဏ်၊ "bootable" USB key ကိုဖန်တီးပါ
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရလျှင် Linux သည် operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အတွေးအခေါ်အောက်တွင်တီထွင်ထားသော operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်များကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လိုင်စင်ကိုပေးဆောင်ရန်တာဝန်မရှိပါ။ (သင်သည်သင်၏မျက်စိ patch နှင့်သင်၏ခြေထောက်ကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Linux ကိုအသုံးပြုသောအခါသူတို့သည်သင့်ကိုဘယ်တော့မှနောက်တဖန်မပြောတော့ပါ "ပင်လယ်ဓားပြ" XD ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားလိုချင်တာဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တာက 100% operating system တစ်ခုပါလိမ့်မယ်။ )
Linux ကဲ့သို့သော Unix မှ အခြေခံ၍ သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသောစနစ်များတွင် - "လုံခြုံရေးအဆင့်" သူတို့ Windows (သို့) အခြားစီးပွားဖြစ်လည်ပတ်ရေးစနစ်များတွင်သူတို့ရေတွက်နိုင်သည့်အရာထက်များစွာသာလွန်သည်။ အဓိကအားဖြင့်၎င်းအားအလိုရှိသောမည်သူမဆို Linux အတွင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ “ X” လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုသိနိုင်ကြောင်းအဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည် (အဓိကအားဖြင့်ပရိုဂရမ်မာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းထဲ၌များစွာသောပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဂိမ်းများ၊ ရုံးသုံးအစုံ၊ အသံ / ဗွီဒီယိုပလေယာစသည်တို့ကဲ့သို့သောပရောဂျက်များ၊ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိဖြစ်ပျက်မှုအားလုံးကိုa"ပွင့်လင်း"အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အသုံးပြုသူထံမှဘာကိုမျှဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့် / သို့မဟုတ်လုံခြုံမှုကိုသက်ရောက်စေသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - သင်၏ကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထများ (သင်မကြာခဏသင်မကြာခဏလည်ပတ်နေသည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများ) ၏အမည်မသိစုဆောင်းမှု၊ သင်၌ရှိသောသတင်းအချက်အလက်။ သိမ်းဆည်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ သင့်ကွန်ပျူတာကိုအဝေးမှဝင်ရောက်ခြင်း၊ maleware တပ်ဆင်ခြင်း (ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ Trojans များ၊ worms စသဖြင့်)၊ အထောက်အထားခိုးယူမှုနှင့်အခြားလှည့်ကွက်များများစွာရှိသည်။ (။ ။ Linux ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်လူအများအပြားပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူမဆိုဤမတူကွဲပြားမှုများကိုတွေ့ရှိရန်၊ ဤအန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးတွင်းများသို့အစီရင်ခံရန် (သို့) ဖျက်သိမ်းရန်အတွက်လွယ်ကူပြီး Linux သုံးစွဲသူများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်ကူညီသည်။ D.
ဆိုလိုသည်မှာ Linux အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ Trojans များသို့မဟုတ် rootkits များမရှိဟုသူတို့မဆိုလိုပါ။ ၎င်းတို့တည်ရှိနေသော်လည်းလက်တွေ့ကျသည်။ Linux ကိုပုံစံပြုထားသည့်ပုံစံကြောင့်သူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများသည်လုံးဝနီးပါးဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Linux တွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တော့များသောအားဖြင့်တော့မလိုအပ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအတွက်နှင့် hardware အဆင့်ရှိအရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ဤစိတ်အနှောင့်အယှက်ကိုသက်သာစေနိုင်သည် (ဥပမာ RAM memory);
ဤနေရာတွင်ပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ သော့များ၊ အက်ကြောင်းများ၊ စီးရီးများစသည်တို့အတွက်လိုင်စင်အလွန်အကျွံကုန်ကျမှုများကိုမေ့သွားနိုင်သည် ငါ Linux ကိုသုံးပြီးသောအချိန်တွင်, ငါကသူတို့ကိုမဆိုသုံးစွဲဖို့ပေးဆောင်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေဘယ်တော့မှခဲ့ကြ, ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းအခြားနည်းလမ်းများအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်ကတည်းကဒါဟာအမြဲတမ်းသို့မဟုတ်တစ်ခုခု, သေချာပေါက်ပိုက်ဆံလှူဒါန်းခြင်းကောင်း၏ဖြစ်လိမ့်မယ်အများပြည်သူအဖြစ်အများပြည်သူအဖြစ် / ပရိုဂရမ်ကိုအကြံပြုပါ၊ အခြားဘာသာများသို့ပြန်ဆိုရာတွင်ကူညီသည်။ (သင်အသုံးပြုနိူင်သည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသော application အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ P)
Linux တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် application များ၊ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ၊ ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရသာသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အရရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် Window မန်နေဂျာများ
သူတို့ကိုရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ငါပြောမယ်၊ သူတို့ပြောတာကသူတို့စားပွဲပေါ်ကပြတင်းပေါက်တွေ၊ dialog box တွေ၊ themes တွေနဲ့ cursor တွေကိုပြသဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ အသုံးအများဆုံးမှာ:
မှတ်စု: အဲဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောချင်ရင်၊ အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြောမှာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယား သူမသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ )
ကျွန်တော့်ကိုပိုနားလည်အောင်တစ်ယောက်ချင်းစီဟာအလုပ်ခွင်စားပွဲကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ (သို့) အနည်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြသကြပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာ compressors / decompressor၊ instant messaging clients များ၊ mail clients များ၊ ဖိုင်မန်နေဂျာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားပုံစံများ -
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်ပြောသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Windows program installers (".Exe" or ".msi") ။ သင်သိသည့်အတိုင်းဤဖိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အား application များ (သို့) ပရိုဂရမ်များကိုထိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Linux တွင်ဤဖိုင်များလည်းရှိသည်၊ အသုံးများဆုံးဖြစ်သည် ".Deb" y ".Rpm".
အထုပ်များ deb ဆင်းသက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးပြုကြသည် debianသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ debian, Ubuntu ကို, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntuဗောဓိဘယ်ဟာက၊ Linux Mintစသည်တို့ ဤပုံစံသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်၊ အများအားဖြင့်သင်လိုအပ်သည့် application သို့မဟုတ် program ၏ .deb package ကိုသင်အမြဲတွေ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါ packages များ .rpm ဆင်းသက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးအပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးပြုကြသည် ဦးထုပ်နီသူတို့ Mandriva ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ Fedora, PCLinuxOS, CentOS ၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသော software package format မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြောနိုင်သည် .pkg.tar.xz အခြားသူများအကြား (binaries precompiled) သို့သော်ပိုမိုသောကိစ္စများဖြစ်သည်။ ) ။
အခြားပုံစံထက်မည်သည့်ပုံစံကပိုကောင်းသည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်အသေးစိတ်မသွားပါ။ သို့သော်မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုပေါ် မူတည်၍ သင်အသုံးပြုမည့် software package ပုံစံပေါ်မူတည်မည်ကိုသိရန်အရေးကြီးပါသည်။
Linux တွင်ရွေးချယ်စရာ application များစွာရှိသည်။ အောက်ပါ applications များ -
<° လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအတွက် Clients များ
<° Web browser များ
လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှု ၂၀ ရှိနိုင်သော်လည်းသင်သည်အထင်ကြီးခြင်းသာဖြစ်သည် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါ" ကွဲပြားခြားနား, ငါဘာကိုဆိုလိုသလဲ ကောင်းပြီ, လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အရသာသို့မဟုတ် ဦး စားပေးအရသိရသည်ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြtroubleနာများမှကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပေးနိုင်သောဘလော့ဂ်များ၊ ဖိုရမ်များ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ ဝီကီများ၊ သင်ခန်းစာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ဒါတွေအားလုံးကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် Linux user အမြဲတမ်းလိုလိုအမြဲတမ်းရှိနေတတ်တာကိုယုံပါ "မင်းကိုထွန်းလင်းပေးပါ" သင့်လမ်းပေါ်မှာအနည်းငယ်ရှိသည်။ မရရှိလျှင်အရာအားလုံးကိုသိသောသူရှိသေးသည် (Saint Google) အကယ်၍ သင်ကအဖြေတစ်ခု (သို့) ပြwithနာတစ်ခုနဲ့ကပ်နေရင်သေချာတာပေါ့၊ ဒါကလည်းဖြစ်ပျက်လာပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
<° SuperGamers အတွက်
ကျနော်တို့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနည်းနည်းရတယ် "ကြာရှည်" Linux ကိုသုံးသောငါတို့အားလုံးအဘို့။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ Linux မှာဂိမ်းခေါင်းစဉ်ကြီးတွေရှိဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ၎င်းသည်အတော်အတန်ကျယ်ပြန့်သောဘာသာရပ်ဖြစ်ပြီး Linux ပတ်ပတ်လည်တွင်ကြီးမားသောငြင်းခုံမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းပြောစရာတွေအများကြီးပေးတာကြောင့်ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာမထိတော့ဘူး။ ဒီဟာကမင်းမကစားနိုင်ဘူးလို့ငါမဆိုလိုပါဘူး "ဘာမှမရှိဘူး"။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများအမြဲရှိသည်၊ သို့သော်ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင် Windows တွင်ကဲ့သို့အတွေ့အကြုံရရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ S.
Linux တွင်အလုပ်လုပ်နေသော Native Windows applications များ -
Windows အတွက် Windows application များကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော operating systems များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်တည်ရှိပြီးဖြစ်သော application ကိုခေါ်သည်။ ဝိုင် ဒီလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့တိုင် Wine တွင်လုပ်စရာများစွာရှိပါက (program တစ်ခုမှန်ကန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်) ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည် Windows ကို Virtualizing Virtual Machine တစ်ခုတွင် (၎င်းသည် Windows အတွင်းရှိ Linux တွင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ အလွန်ကောင်းသောသတင်း !!!: D) ။ ဒီနေ့မှာတော့များပြားတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ applications တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် Windows နှင့် Linux နှစ်ခုစလုံးတွင်အဆင်မပြေမှုများမရှိပဲလည်ပတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရွေးချယ်ထားသော OS အတွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရုံသာဖြစ်သည်။
အိုကေလူ၊ မင်းငါ့ကိုယုံတယ်ငါ Linux ကိုစမ်းချင်တယ်။ ငါဘယ်လိုလုပ်သလဲ
၎င်းသည် distro တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည် (ဖြန့်ဝေရန်တိုသည်); ကျွန်တော်တစ် ဦး စက်ရှိပါက "နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံ" ကျွန်တော်တို့ဟာဘာမဆိုလက်တွေ့ကျကျ install လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မရဘူးဆိုရင် distro ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်။ Linux သည်သင်၏ WiFi ကိရိယာများ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အသံကဒ်များအတွက် driver များစွာကိုယူဆောင်လာသည်။ သို့သော်ဖြန့်ဝေမှုအားလုံးတွင်၎င်းတို့အားပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းပြproblemsနာများကြောင့် (၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း (သို့) မူပိုင်ခွင့်ရထားသောဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သောကြောင့်) သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အသစ်အဆန်းလွန်းသောကြောင့် distros များမပါ ၀ င်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် web ကိုထုတ်လုပ်ရန်ပတ်ဝန်းကျင် (အလုပ်များ၊ ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဗီဒီယို၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု) အစရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ Linux ဖြန့်ချိမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းများစွာသည်လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပေးသည်။ ဒီတော့အကယ်လို့အသံဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးကိုအထူးထုတ်လုပ်တဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်မယ်၊ တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ၊ ငါတို့ရှာမယ့်အရာကအဲဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အပလီကေးရှင်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် web browser နဲ့ word processor ကို install လုပ်ဖို့သင့်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်လား။ ငါတို့လိုအပ်တာနဲ့အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းတီးလိမ့်မယ်ဟုတ်သလား။
အချို့ distros များသည်ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အကြောင်းမှာအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများ၏ ၁၀၀% ကိုအခြားသူများထက် ပို၍ ကြာအောင်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ Linux ထည့်သွင်းမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များအရပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အချိန်ပိုများပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်ပါက။ ဤအရာအားလုံးသည်သုံးစွဲသူရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
သတင်းအချက်အလက် / မှတ်တမ်း
Linux ဖြန့်ချိသူအားလုံးနီးပါးတွင်သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသော်လည်းအချို့ကိစ္စများတွင် X သို့မဟုတ် Y ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်သင့်အား ပို၍ ကုန်ကျလိမ့်မည်။ ယင်းသည် distro ဖြစ်လေလေ၊ ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရန် ပို၍ လွယ်ကူလေ၊ ၎င်းသည်စည်းမျဉ်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်သည်။
အချို့ဖြန့်ဝေမှုများသည်အခြားသူများထက် (များပြားသောအားထုတ်မှုမရှိဘဲထည့်သွင်းနိုင်သည့်) အပလီကေးရှင်းများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ Debian အခြေပြုဖြန့်ဝေမှုများသည်အခြားဖြန့်ဝေမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းမှအကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ compile လုပ်ဖို့လိုတာကိုရှောင်ရှားခြင်းငါကြောက်ရွံ့။ မုန်း၏ "arcane ပညတ်တော်တို့ကို" သင်၏ distro အတွက်မရှိသော X application ကို install လုပ်နိုင်ရန်။
Desktop Environment / Window Manager:
ငါအရင်ကရှင်းပြခဲ့သလိုပဲငါတို့စားပွဲခုံဒါမှမဟုတ်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေက။ သူတို့ကပြောတာကအချစ်ကမွေးကတည်းကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အနာဂတ်စားပွဲခုံတွေဘယ်လိုပုံမျိုးချန်ထားခဲ့မှာလဲ။ သင်အနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုရွေးပါ
မှတ်စု: ငါ ထပ်မံ၍ အလေးအနက်ပြောရလျှင်၎င်းတို့အားလုံးသည် ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာများသို့မဟုတ် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များမဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသုံးအများဆုံးသောအရာများကိုသာထားခဲ့သည်။
Linux ဖြန့်ချီမှုအများစုသည်ဖြန့်ချိထားသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာလည်ပတ်မှုတွင်လည်ပတ်ကြသည် သိသိလွှတ်ပေးရန်) ။ ဆိုလိုသည်မှာဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူအရေးကြီးဆုံးသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုအခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ distro သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမွမ်းမံလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းကိုအသစ်ထပ်မံတင်သွင်းမည်ဖြစ်သော်လည်းကြိုကြားကြိုကြားသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုသာအသစ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်သည် distro ၏ developer များအနေဖြင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်အသစ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစမ်းသပ်ရန်အချိန်အလုံအလောက်ရရှိကြသည်။ သို့မှသာအသုံးပြုသူများသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဗားရှင်းများနှင့်အဆင်မပြေမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Ubuntu ကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောဖြန့်ဝေမှုများတွင်သူတို့၏ update update သည် ၆ လတစ်ကြိမ်ခန့်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိုအချိန်ကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင်၊ ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုသည်၎င်းထဲရှိအချို့သောအရာသို့မဟုတ်များစွာသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အခြားဖြန့်ဝေမှုများတွင်အချိန်ကာလကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မကြာခဏမကြာခဏတပ်ဆင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲများ (ခံစားနေရသောကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ) ဗိုင်းရပ်စ် : P) ။ အကယ်၍ သင်ဆန္ဒရှိပါကသင်သည်သင်၏စက်ကိရိယာ၏လက်ရှိဗားရှင်းကိုအချိန်ပိုကြာအောင်နေနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ခိုင်မာသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာမရှိသောဖြန့်ဝေမှုများလည်းရှိသည် လှိမ့်ဖြန့်ချိ) ။ ဒီ distros များကသင့်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာများကိုအမြဲတမ်းခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး version ကိုနောက်လာမည့် version အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ငြီးငွေ့ဖွယ်အလုပ်ကိုသင်လုံးဝမေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးအစားများကိုအသစ်ရောက်ရှိလာသူများကိုမထောက်ခံပါ။ အစဉ်အမြဲမပြတ်မွမ်းမံနေပြီးဤအခြေအနေကြောင့်ပြproblemနာအချို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဒီဖြန့်ဖြူးအမျိုးအစားနှင့်အတူပြproblemsနာများဖူးဘူး, သင်တန်း, ကအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုသိ။ လိုအပ်ပေသည် "အဖြစ်" နှင့် "အဘယ်ကြောင့်" X သို့မဟုတ် Y လျှောက်လွှာကို install လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အချိန်နှင့်အချို့သောဆုတ်ယုတ်မှုကိုဖြေရှင်းရန် ၀ က်ဘ်သို့အနည်းငယ် ၀ င်ရောက်လိုသောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
သင်၏ distro ကိုရွေးချယ်ပါ။
နောက်ထပ် ado မရှိလျှင်မည်သည့်ဖြန့်ဝေမှုများသည်သင်၏အဖွဲ့အတွက်အသုံးဝင်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကြည့်ကြစို့။
<°ဖြန့်ဝေခြင်း: Ubuntu ကို
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားပုံစံများ - deb
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: Gnome - ညီညွတ်ရေး
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာ Cyclic လွှတ်ပေးခြင်း
အသုံးပြုခြင်း / တပ်ဆင်ခြင်းလွယ်ကူခြင်း - လွယ်ကူသော
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: KDE
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: Xfce
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: LXDE
<°ဖြန့်ဝေခြင်း: ဗောဓိ Linux ကို
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: သစ္စာဉာဏ်အလင်း
<°ဖြန့်ဝေခြင်း: Linux Mint
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: Gnome
<°ဖြန့်ဝေခြင်း: မူလတန်း OS
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားပုံစံများ - .rpm
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: Gnome သို့မဟုတ် KDE
<°ဖြန့်ဝေခြင်း: တော့ openSUSE
Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: Openbox, KDE, XFCE သို့မဟုတ် LXDE
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာ Rolling လွှတ်ပေးရန်
အသုံးပြုခြင်း / တပ်ဆင်ခြင်းလွယ်ကူခြင်း - လွယ်ကူ / ပုံမှန်
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားပုံစံများ - .pkg.tar.xz (ကြိုတင်ပြုစုထားသောဖိုင်တွဲများ)
core တစ်ခုတည်းနှင့် RAM 1 Gigs ထက်နည်းသောကွန်ပျူတာများအတွက်:
torrent (အကြံပြုထားသည်): http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-i386.iso.torrent
torrent (အကြံပြုထားသည်): http://downloads.bodhilinux.com/torrents/bodhi_1.3.0.iso.torrent
torrent (အကြံပြုထားသည်): ?
နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော cores နှင့် RAM ရှိ2Gigs ထက်ပိုသောကွန်ပျူတာများအတွက်:
torrent (အကြံပြုထားသည်): http://releases.ubuntu.com/11.10/ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso.torrent
torrent (အကြံပြုထားသည်): http://torrent.ubuntu.com/kubuntu/simple/oneiric/desktop/kubuntu-11.10-desktop-amd64.iso.torrent
တိုက်ရိုက် download: http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-amd64.iso
torrent (အကြံပြုထားသည်): http://iweb.dl.sourceforge.net/project/bodhilinux/bodhi_1.3.0.iso
torrent (အကြံပြုထားသည်): http://www.mandriva.com/es/downloads/download.html?product=Mandriva.2011.x86_64.1.iso&torrent=1
တိုက်ရိုက် download: http://sourceforge.net/projects/chakra/files/2011.12/chakra-2011.12-Edn-x86_64.iso
ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ "X.iso" ၎င်းကိုကူးယူနိုင်သည် (CD / DVD) သို့ကူးနိုင်သည် ((မှတ်တမ်းတင်သည့်အချိန်တွင်၊ သင်ပုံတွင်ကူးယူရန်ရွေးချယ်ရမည်။ )) သို့မဟုတ် bootable pendrive တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။
Pendrive တစ်ခု၊ USB မှတ်ဉာဏ်၊ USB ခလုတ်ကိုဖန်တီးပါ "Bootable"
Universal USB Installer ပါ
ငါတို့မလျှောက်ဝံ့ကြ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါင်းကိုပစ်။ " ပြီးတော့ Linux ကို install လုပ်ပါ
Linux အများစုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာအကူအညီမဲ့သို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်ဟုခံစားရသောထူးဆန်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည် ရေပေးပါ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမဝင်ရောက်ပဲသတင်းအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲနေပါ။ (Nah အနည်းငယ် sarcasm XD) ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်မှာ၊ Linux တွင်ဖြန့်ချိမှုများစွာရှိပြီးသင့် hard drive တွင်ထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ (အထက်တွင်တွေ့ရသော distribution table ၏ပညာရှိအကြံဥာဏ်ကိုမလိုက်နာပါက P) , ခေါ်ဆိုမှုများ LiveCD's။ ၎င်းဖြန့်ဝေမှုများသည်သင့်ဆိုဖာ၏လုံခြုံမှုမှ Linux နှင့်ကစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ pendrive / USB, CD သို့မဟုတ် DVD ကိုထည့်ပြီးသင့်ကွန်ပျူတာ (သင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ရန်သာလိုအပ်သည်။ BIOS ကို ၎င်းကိုသင်စမ်းသပ်ရန် CD / DVD (သို့) USB မှစတင်ရန်စီစဉ်ထားရမည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်သင့်တွင်အပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နိုင်သည့်လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိလိမ့်မည်။ ဒါကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်လော သင်၏ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ။ CD, DVD သို့မဟုတ် USB drive ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ပုံမှန်ပြန်သွားပါလိမ့်မည် (Linux ကိုသင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ hard drive တွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအရာများကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ ) )) ။ သင်အဆင်ပြေမယ့်၊ နာရီ၊ နေ့စသဖြင့်စဉ်းစားသလောက်စမ်းသပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံပါ။ ဤသည်မှာမြေအနေအထားကိုသင်စတင်သိရှိလာပြီးသင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးအသိအမှတ်ပြုခံရပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် web browsers, mail clients များကဲ့သို့သော application များကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အသုံးချပရိုဂရမ်အသစ်များကို install လုပ်ရန် (သို့) သင်မလိုအပ်သောအရာများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ သငျသညျအဆင်သင့်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေခံစားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်;) ။
အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Linux ကိုသာတပ်ဆင်ရန် Windows ကိုထားခဲ့ခြင်းသည်အလွန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်မြင်ပါက၊ သင်၌ရှိနိုင်သည် dual-Boot ကို။ Dual Boot ဆိုသည်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် operating system2ခုရှိသည်။ သင်စတင်ချင်သော OS နှင့် PC ကိုဖွင့်သောအခါရွေးချယ်ခြင်း (တကယ်တော့သင်၌များများရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်အတော်အတန်အဆင့်မြင့်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်) ။
ကောင်းပြီသူငယ်ချင်းကောင်းပြီ၊ ဒါကအစပဲ၊ သင်ကျိန်းသေရရှိနိုင်ရန်အနည်းငယ်ပိုကျန်သေးသည် "ဗားရှင်း" သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Linux ။ နောက်ပိုင်းပို့စ်များတွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်စဉ်ကကျွန်ုပ်အားလမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မည်။ လာမည့်အချိန်အထိ😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Linux ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါသလား။ စပ်စုနှင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောများအတွက်လမ်းညွှန်။
52 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Linux အများစုသည်ထူးဆန်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုရေလောင်းခြင်းမှအကူအညီမဲ့သည်ဟုခံစားရနိုင်သည်
အံ့သြဖွယ်ရာ post, ဂုဏ်ပြုလွှာ။
အလွန်ကောင်းသော post ကိုအလွန်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ကြီးသောလက်တွေ့ကျတဲ့ utility ကိုအတူ။ အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ )
+1000 Excellent က Perseus ^^
အဖွဲ့ရဲ့သူငယ်ချင်းမှကြိုဆိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုဒီမှာရှိနေတာတကယ်ကို ၀ မ်းသာပါတယ်
ကောင်းတာက XD ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ လေ့လာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပါးခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကောင်းခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည် Linux အတွက်နေရာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် @အားလုံး : D !!!! (အထူးသဖြင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိသောအတွက် - -)) ... XD
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (@Elav နှင့် @KZKG ^ Gaara) ငါ့ကိုဒီကြီးမားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်ငါ့ကိုဖိတ်ကြားပြီးလျှင်၎င်းကိုရေးသားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုမသိရင် အလွန်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်းသို့ရောက်ကြ၏ : - # ။ ဤအမှုအလုံးစုံအတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ TT
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့မကြာခဏအလွန်မကြာခဏရေးသားခြင်းနှင့်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ အရာအားလုံးဟာလူတွေလိုဝေမျှ၊ သင်ယူ၊ ကြီးထွားဖို့ပါ။
မင်္ဂလာပါ ... 😉
ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ဒီအသိုင်းအ ၀ ိုင်းထဲမှာပါ ၀ င်ဖို့အော်ပရာကိုသုံးတဲ့သူထက်ပိုကောင်းတဲ့သူမရှိ🙂
ငါဒီနေ့ရေဆက်လက်သောက်နေတယ်၊ ​​ရေကိုတိုင်းအံ့ way ဖွယ်ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ရေလောင်းတိုင်းငါစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကကောင်းတယ်၊ ငါကြိုက်တယ်: D. အကြိုက်ဆုံးသို့ !!
sisas သည်ကောင်းမွန်သောပို့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်သို့သော် @Perseo သည်ပြsmallနာအချို့ကိုဖြေရှင်းသည်။ ဆယ်ခုမှာ - Core တစ်ခုတည်းရှိသည့်ကွန်ပျူတာများနှင့် RAM တွင် 1 Megas ထက်နည်းသောကွန်ပျူတာများအတွက်နှင့် cores ၂ ခုထက်ပိုသောကွန်ပျူတာများနှင့် RAM တွင် Megas ၄ ခုကျော်သည် Gigs of RAM ဖြစ်သည်။
မကောင်းတဲ့လင့်ခ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိသေးတယ် Universal USB Installer ပါ.
သင်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည် post သည်အလွန်ကြီးပြီး currado အလွန်ကြီးကြောင်း၊ ထိုအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်အမှားများမှကင်းလွတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းသိသည်။
Oooooooooorale! ငါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုဖွင့်ပါးစပ်အိုင်ကွန်ထားရန်ခွင့်ပြုတဲ့ Beacon ကိုချက်ချင်းထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုသည် အထင်ကြီး!
ဂုဏ်ယူပါတယ် Perseus နှင့်ဤမျှလောက်အပျနှံဘို့ကျေးဇူးတင်စကားတထောင်။
Yup hehe ... ထုံးစံစိတ်ခံစားချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည်ဟုဆိုင်းငံ့ထားသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့လုံးဝသဘောတူတယ် ... အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါး၊ တကယ် ... ပြသခဲ့သည် ... ဘလောဂ့်ကိုအိမ်ရှေ့တံခါးမှတစ်ဆင့် ၀ င်လိုက်သည် LOL !!!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း။ နောက်ပိုင်းငါကိုယ်တိုင်မယုံတော့ဘူး။ XD
ဒါဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော haha ​​@Perseo အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုသင်နေရာချထားသော distros တစ်ခုချင်းစီအတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုလုပ်ရမည်။ အဲဒီလိုလုပ်ရင်မင်းက fuck ဆိုတဲ့မာစတာဖြစ်လာတယ်။
Hahahaha၊ အဲ့ဒီလမ်းညွှန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Ubuntu 12.10 နဲ့ Linux Mint 14 XD ထွက်သွားလိမ့်မယ်
အကယ်၍ သင်ဆန္ဒရှိပါက၎င်းကို Taringa ထဲကိုသင့်အကောင့်အောက်မှာထည့်ထားနိုင်ပြီးမူရင်းဆောင်းပါးကိုလင့်ခ်လုပ်ပြီး Perseo ကိုစာရေးသူအဖြစ်ဖော်ပြခြင်း😀
အလွန်ကြီးမားသော! ... ဂုဏ်ယူပါတယ် Perseus, တစ် ဦး အထင်ကြီးလမ်းညွှန်, ငါဤလောက၌စတင်ရန်ငါကိုဖတ်ကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု။ ဤကဲ့သို့သောအလွန်အစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် Linux ကိုအသုံးပြုရန်လူသစ်မည်မျှအားတိုက်တွန်းသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ အချို့မှာငါးမျှားကြလိမ့်မည်။
တနည်းကား, ဂုဏ်ပြုလွှာ ...
နောက်တစ်ခု? ဟားဟားငါတို့အယ်ဒီတာတွေရဲ့ကြက်ဥတွေပြီးပြီ။ ငါတို့နဲ့အတူရင်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုချိုးဖျက်နိုင်တယ်။
ဟဟဟေ့ဟေ့ကောင်းပြီ၊ ငါပြောပြီ ... ဟေ့ဟ၊ မင်းစိုးရိမ်နေတာ ရဲစွမ်းသတ္တိ? ... သူတို့ကမကြာခင် HAHAHA ကို ဦး ဆောင်သွားမှာပါ၊ ငါပြောပြီးပြီ ... ငါတို့ (အနာဂတ်မှာယခု haha ​​မရနိုင်ပါ) အကောင်းဆုံးစာရေးဆရာများကိုချီးမြှင့်လိမ့်မည်😉
ငါဆုစကားပြောခြင်းဖြင့်ငါထင်သောအရာကိုသင်တို့ကိုပြောပြပြီးပြီ, သင် EMO အကြောင်းငါ့ကိုပြောပြပါ, လူအိုသတိရပါ
mmm nope ငါ LOL မမှတ်မိဘူး !!! yup ... အဲဒါအသက်ပဲ ... ဟဟဟဟဟ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်း troll 😉
ဤလမ်းညွှန်သည်ဤကဲ့သို့သောပြီးပြည့်စုံသောပထမဆုံးလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Linux အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိလိုသမျှအရာအားလုံးဖြစ်သည်။
@Ozcar နှင့် @hairosv ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
Perseus, ဘလော့ဂ်ကိုကြိုဆိုပါ၏ (ကျွန်ုပ်ဖိုရမ်၌ကျွန်ုပ်ကိုဖတ်ပြီးကတည်းက) နှင့်ပို့စ်မှ ၀ မ်းမြောက်ပါသည်။ အခုအချိန်မှာမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို Linux ကိုချက်ချင်းပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဒီ post ကနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုအရာရာတိုင်းကိုယုံကြည်လာအောင်လုပ်နိုင်မှာပါ။
ကြီးမားတဲ့ post ကို !!!!
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ် ... ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်။
ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိစေရန်သင်ပြောသကဲ့သို့အလွန်ကောင်းသောရိုးရှင်း။ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးသော Perseus လမ်းညွှန်
အလွန်ကောင်းသော post ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော။
GNU / Linux တွင် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များစွာအသုံးပြုရန်ရည်ညွှန်းသည်မှာကောင်းမွန်သည်။ အခြား operating systems များတွင်ပင်အိပ်မက်မက်သည်မဟုတ်။
ဒါကငါတို့အတွက်ဒီနေရာကိုရောက်နေတာ၊ သူငယ်ချင်း၊ ) မင်းကိုဒီမှာရှိနေတာက ၀ မ်းသာစရာပါပဲ။
ဆောင်းပါးကောင်းတယ်၊ http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernelLinux သည်နည်းပညာပိုင်းအရ Unix ကဲ့သို့သော operating systems ၏အဓိကဖြစ်သည်။
ကောင်းမြတ်သောပို့စ်၊ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Linux အကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်ယူရိုရာနဲ့ချီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုသုံးစွဲရတာပင်ပန်းတယ်။ အဲဒါကိုငါကြိုးစားပြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ နောက်မှငါတစ်ခုခုလေ့လာပြီးသင့်ကိုကူညီနိုင်ရင်ငါလုပ်မှာပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့် site ကိုမှ welcome ကြိုဆိုပါတယ်
ဒီလမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ကွန်ပျူတာပတ် ၀ န်းကျင်စသည်တို့အကြောင်းရှင်းပြထားသည့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုလိုပါသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျားသိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့ဒီမှာရှိနေပါတယ်
ဒီလမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပဲ xubuntu ကို install လုပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားမိသည်။ တကယ်တော့ခင်ဗျားရဲ့ထည့်ဝင်မှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အားရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်ကိုကြွေးတင်နေမှာပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ဆောင်းပါးတွေအကြောင်းပိုသိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ရှင်းပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
သငျသညျ, အစွမ်းထက်တဲ့ post ကိုတက်ဆွဲထားကြ၏ သငျသညျထောင့်မှာ Messi ခဲ့လျှင်။
Shimmer Project - Xfce အတွက်လှပသော themes များ